ဘယ်အဆင့်တွေ ပိုမြင့်လဲ။ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 05/01/2022 21:33 | လေ့ကျင့်ရေး
ဘယ်အဆင့်တွေ ပိုမြင့်လဲ။ လေ့ကျင့်ရေး ခရီးစဉ်၏ ရွေးချယ်မှုသည် ကျွမ်းကျင်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ မြင့်မားသောဘွဲ့သည် ကျောင်းသားအား ထူးထူးခြားခြား လက်တွေ့ကျသော လေ့ကျင့်မှုကို ပေးသည်။ ဤသည်မှာ သင်ယခု သို့မဟုတ် အနာဂတ်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သော ရွေးချယ်စရာအချို့ဖြစ်သည်။
1 ငယ်ရွယ်စဉ်ပညာရေးတွင် အဆင့်မြင့်ဘွဲ့
3 Aesthetics အထူးပြု အဆင့်မြင့်ဘွဲ့
4 ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အထူးပြု အရည်အချင်းရှိရမည်။
5 ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွင် ဘောင်ခတ်ထားသော ဒီဂရီများ
ပညာရေးနယ်ပယ်သည် ယနေ့ခေတ်တွင် အလိုအပ်ဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပညာရှင်တော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ အသိပညာနယ်ပယ်မှာ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို တိုးတက်စေချင်ကြပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ Early Childhood Education နယ်ပယ်တွင် အလုပ်ရှာလိုသူများသည် ဤနည်းကို တန်ဖိုးထားနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းသားသည် ဤအဆင့်တွင် သင်ကြားရေးနှင့် သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ပြီးပြည့်စုံသောအမြင်ကို ရရှိသည်။ ပညာပေးသူသည် လမ်းပြသူဖြစ်သော်လည်း၊ အာကာသပြင်ဆင်မှုကိုယ်တိုင်ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။. ဤနည်းအားဖြင့် ကျောင်းသားသည် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်။
El ဖွဲ့စည်းမှုဒီဂရီ ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်မှာ ပညာရေးတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေးဆောင်သည်။ ဒါပေမယ့် သင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ အခြားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရွေးချယ်စရာတွေ ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ ကမ္ဘာမှာ အလုပ်ဝင်ချင်ပါသလား။ ကျောင်းသားသည် စာရင်းကိုင်နယ်ပယ်တွင် သင်တန်းတက်သည်။ ထို့ကြောင့်, ယနေ့ခေတ် အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်တွင် အလွန်တောင်းဆိုနေသော သင်တန်းတစ်ခုရှိသည်။. ထို့အပြင်၊ သင်သည် လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရာတွင်လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သော အရည်အချင်းတစ်ရပ်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်မှာ အကြံဥာဏ်တစ်ခုကို အောင်အောင်မြင်မြင် တွန်းအားပေးချင်ပါသလား။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် စီမံကိန်း ရေရှည်တည်တန့်စေရန်အတွက် စာရင်းအင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Aesthetics အထူးပြု အဆင့်မြင့်ဘွဲ့
ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကို မရွေးချယ်မီ အကဲဖြတ်နိုင်သည့် ကျယ်ပြန့်သော ပညာရေးကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဤနယ်ပယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ပြသသည့် မတူညီသော နည်းလမ်းများနှင့် ကုသမှုများ ရှိပါသည်။ တစ်ဖန် Aesthetics သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဤသည်မှာ မိမိကိုယ်မိမိ လေးစားမှုကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်၏ ကနဦးအဆင့်တွင် အထူးသက်ဆိုင်မှုတစ်ခုရရှိရန် ရည်မှန်းချက်များစွာရှိပါသည်။ ဖြစ်သလို၊ အချို့သောပန်းတိုင်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။. ဤအကြောင်းကြောင့် ဤနယ်ပယ်တွင် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်သော ဤအဆင့်မြင့်ဘွဲ့သည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို လေ့ကျင့်ပေးသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အထူးပြု အရည်အချင်းရှိရမည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ယနေ့ခေတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်။ ပျော်ရွှင်မှု၊ အသိပညာနှင့် သုခချမ်းသာတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အခွင့်အလမ်းများစွာကို ပေးဆောင်သည့် ကဏ္ဍများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာသီအလိုက် အလုပ်ခန့်မှု တိုးလာသောကြောင့် အများစုမှာ ရာသီအလိုက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ရရှိကြသည်။ ဖောက်သည်သည် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ကျယ်ပြန့်သောဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်။
သို့သော်၊ သင်၏စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်တိုင်၏အရည်အသွေးပေါ်တွင်သာမက ရရှိထားသောစောင့်ရှောက်မှု၏နောက်ဆုံးအကဲဖြတ်မှုပေါ်တွင်လည်းမူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, လေ့ကျင့်ရေးသည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ရန် သင့်ကိုယ်သင် အခြားသူများနှင့် ခွဲခြားပါ။
ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွင် ဘောင်ခတ်ထားသော ဒီဂရီများ
လက်ရှိတွင် ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များသည် စောင့်ရှောက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍သာမက ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ရေးတွင်လည်း အရေးကြီးသော အလုပ်များကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများစွာသည် ကပ်ရောဂါ၏နယ်ပယ်တွင် မွမ်းမံထားသောအချက်အလက်များနှင့် မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များမျှဝေရန် ၎င်းတို့၏လူမှုကွန်ရက်များကို အသုံးပြုကြသည် သို့မဟုတ် မတူညီသောမီဒီယာများတွင် ရှိနေကြသည်။
ကောင်းပြီ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလောကတွင် ပညာရှင်အများအပြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။. ထို့ကြောင့်၊ အချို့သောကျောင်းသားများသည် အထူးပြုဘွဲ့တစ်ခုပြီးမြောက်ပြီးနောက် ဤကဏ္ဍတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကို အာရုံစိုက်ကြသည်။ သူနာပြုလက်ထောက်အဆင့်မြင့်ဘွဲ့သည် အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘယ်အဆင့်တွေ ပိုမြင့်လဲ။ Training and Studies တွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည့် ဥပမာများအပြင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနယ်ပယ်တွင် ဘောင်ခတ်ထားသည့် ဒီဂရီများလည်း ရှိပါသည်။ ယနေ့ခေတ် တန်ဖိုးအရှိဆုံး အကိုင်းအခက်များထဲမှ တစ်ခု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » လေ့ကျင့်ရေး » ဘယ်အဆင့်တွေ ပိုမြင့်လဲ။
နိုင်ငံတကာ ဘွဲ့လက်မှတ်ဆိုတာ ဘာလဲ။